Instagram ကို | November 2019
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု November 19,2019
အဓိက Instagram ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Instagram ကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုထုတ်ဝေဖို့ကိုဘယ်လို
Instagram ကို - iOS နဲ့ Android operating system မြား running စမတ်ဖုန်းများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုထုတ်ဝေရန်ဖို့ရေပန်းစားလူမှုကွန်ယက်။ ကံမကောင်းစွာပဲ developer များအပြည့်အဝ Instagram ကို၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးခံစားရန်ခွင့်ပြုမယ်လို့ထားတဲ့သီးခြား PC ကိုဗားရှင်းထောက်ပံ့ကြပြီမဟုတ်။
Instagram ကို - တစ်ဘာသာပေါင်းစုံ interface ကိုနှင့်ပြည့်စုံသောကမ္ဘာကျော်လူမှုရေးကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် Instagram ကိုသတ်မှတ်ရင်းမြစ်ဘာသာစကား, အလွယ်တကူအခြားဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဗားရှင်းကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေသင်လုပ်နိုင်သည် Instagram ကို Instagram ကိုအသုံးပြုနည်းဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲနှင့် Android, iOS နဲ့ Windows အတွက်လျှောက်လွှာတဆင့်။
Instagram ကိုစတင်ရန်။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို၏ tab ကို၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ။ အထက်ညာဘက် pane ထဲကမှာတော့ Menu ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးမှာ "Settings" ကိုဖွင့်ပါ။ က "သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး" ပွင့်လင်းတဲ့ item "Privacy Account ။ " အဆိုပါလှုပ်ရှားအနေအထားအတွက် parameter သည်န်းကျင် "အကောင့်ပိတ်ထားသော" ဟုအဆိုပါ slider ကိုရွှေ့ပါ။
မကြာခဏ Instagram ကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးလူမှုကွန်ရက်ပရိုဖိုင်းအတွက်ဓါတ်ပုံအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေ့ထိုသို့ပြုမှအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများမှာကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီဟာအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည် Instagram ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများအပေါ်ပုံရိပ်တွေ Hide ။ Method ကို 1: သင့်အကောင့်ထဲတွင်နေရာသင့်ရဲ့စာပမြေားရန်စာမျက်နှာကိုပိတ်လိုက်သာသင့်ရဲ့သုံးစွဲသူများအနီးကပ်အလုံအလောက်စာမျက်နှာပေးသွင်းပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Password ကို - အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကောင့်၏အဓိကနည်းလမ်း။ သောကြောင့်ပရိုဖိုင်း၏ခိုးယူ၏မကြာခဏဖြစ်ပွား, များစွာသောအသုံးပြုသူကံမကောင်းအလျင်အမြန်မေ့လျော့လေ့ရသောရှုပ်ထွေးသောစကားဝှက်ဖန်တီးပါ။ ဘယ်လိုစကားဝှက်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့သင်ယူဖို့ Instagram ကိုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ password recovery - ထို့နောက်အသုံးပြုသူအသစ်တခုလုံခြုံရေးကီးကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးစကားဝှက်ပြန်ညှိဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လူတိုင်း Instagram ကိုစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူကြား၏ခဲ့သည်။ သင်ရုံဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်စတင်ကြလျှင်, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်သည်မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Instagram ကို၏လုပျငနျးနှင့်ဆက်စပ်သောလူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုသူမေးခွန်းများကိုပါရှိသည်။ ယနေ့တွင် Instagram ကို - ကဖွင့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ထုတ်ဝေဘို့နည်းလမ်း, ဒါပေမယ့်နီးပါးတိုင်းအသစ်က update ကိုနှင့်အတူစည်ပင်ထားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ tool ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားစရာစာမျက်နှာများကိုမျက်ခြည်ပြတ်မရှိစေရေးအတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စီးအတွက်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်အသစ်ဓာတ်ပုံများထုတ်ဝေသူတို့ကိုစာရင်းသွင်း။ ရလဒ်အနေနဲ့တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူ Instagram ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်သူကို subscriber များအားစာရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူကိုသင်စာရင်းသွင်းထားပါသည်ချင်ကြဘူးဆိုပါကနှုတ်ထွက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူမှုဝန်ဆောင်မှု Instagram ကို developer များမှန်မှန်သစ်တစ်ခုအဆင့်အထိန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားကြောင်းအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် features တွေထည့်ပါ။ အထူးသဖြင့်, လအနည်းငယ်အကြာအတူတကွလာမည့် application ကို update ကိုအတူအသုံးပြုသူများအသစ်တစ်ခု function ကို "သမိုင်း" ရှိသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ Instagram ကို၏သမိုငျးတှငျမွငျနိုငျဘယ်လိုကြည့်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ငါ Instagram ကိုအဘို့အ sign up ကိုမနိုင်
စတာတွေက, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ၏ထုတ်ဝေရည်ရွယ်တစ်ဦးလူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှု, ပုံပြင်များဖန်တီးဘာသာပြန်ချက်များကိုထွက်တင်ဆောင်လာသော, သူ့ဟာသူဖျက် - အထူးသဖြင့်လူမှုကွန်ယက်၏စုစုပေါင်းကြွယ်ဝသောစည်းစိမ် Instagram ကိုထွက်ရပ်၏ အသစ်ကမှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်များဖြင့် updated နေ့စဉ်မိတ်ကပ်အသုံးပြုသူများသည်။ ဒီနေ့အသစ်ကပရိုဖိုင်း၏ဖန်တီးမှုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဖျော်ဖြေဖို့လာသောအခါ၏ပြဿနာကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
အဘယ်ကြောင့် Instagram ကိုပျံ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ Instagram ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းများအတွက်အများဆုံးတက်ကြွစွာဒေါင်းလုပ်လုပ် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအခြိနျမှနျမှအသုံးပြုသူများကယင်း၏မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအကြောင်းကိုတိုင်ကြား။ အထူးသဖြင့်ယနေ့ကနျြောတို့ Instagram ကို app ကိုပျက်ကျကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအကြောင်းရင်းများမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Instagram ကို install လုပ်နည်း
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်၏တဦးတည်း Instagram ကိုဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုသူ၏အသက်တာ၏အချိန်လေးမျှဝေ, အသေးစားဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ဝေခွင့်ပြုပါတယ်။ အောက်တွင်ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Instagram ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု၏ developer များအထူးသ iOS နဲ့ Android operating system မြား running စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်လူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း positioned ပါပြီ။
Instagram ကိုအပေါ်ကို advertise လုပ်နည်း
သငျသညျမဟုတျဘဲမိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများအဖြစ်ကုန်စည်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်တစ်ဦး tool ကို, ဝန်ဆောင်မှုများဝက်ဘ်ဆိုက်များထုတ်ဝေနေတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ် Instagram ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုကြော်ငြာရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအသုံးပြုသူအများကြီးပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကသငျခနျးစာယူနိုငျဆိုတဲ့အချက်ကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ မိမိအစမတ်ဖုန်း app ကို Instagram ကိုမျက်နှာပြင်အပြေးလူများ, စည်းကမ်းအဖြစ်စာရင်းပေးသွင်းထားမှုများစာရင်းထဲကဖွဲ့စည်းခဲ့သောသတင်းအစာကျွေးခြင်း, ကြည့်ရှုရန်စတင်။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Instagram ကိုမှသတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့
Method ကို 1: သင်ဟာအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး Message ပေးပို့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, ကံကောင်းထောက်မစွာကွန်ပျူတာနှင့်အတူ Instagram ကိုမှမှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းသင်သည်မည်သည့်ဘရောက်ဇာကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည့် Instagram ကို၏ဝဘ်ဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကဤလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူ, မှတ်ချက်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ Instagram ကိုစာမျက်နှာ၏ဝဘ်ဗားရှင်းသွားပြီး, လိုအပ်သောလျှင်, ခွင့်ပြုချက်လုပ်ဆောင်။
Instagram ကိုမဆိုအခြားလူမှုရေးကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု၌ရှိသကဲ့သို့တစ်ဦး function ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအကောင့်လည်းမရှိ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်သည်သူတို့၏ဘဝများ၏ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေချင်ပါဘူးသူကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောသုံးစွဲသူများထံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်ပြောင်းပြန်ခွအေနကေိုစဉ်းစားမည် - သင်ကအသုံးပြုသူရဲ့အနက်ရောင်စာရင်းဝင်မတိုင်မီသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူသန်းပေါင်းများစွာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ smartphone ကိုထုတ် ယူ. လျှောက်လွှာ Instagram ကိုစတင်ပါ။ များစွာသော user တွေအတွက်, ဒီ service ကိုနေ့တိုင်းသူ၏အသက်တာ၏အများဆုံးသာယာသောသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချိန်လေးဝေမျှနိုင်မည့်အဓိကလူမှုကွန်ယက်၏တဦးတည်း, ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မဟုတ်, ငါတို့တွေ့နိုင်ပါသည် - မကြာခဏစာမျက်နှာကိုပိတ်လိုက်သည်။
Instagram ကိုမှဓာတ်ပုံများထုတ်ဝြေခင်း, ပုံလည်းဒီလူမှုရေးကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအဖြစ်နိုင်သည်တော်မူသောငါတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း, get ။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်လော မာကုပုံထဲကအသုံးပြုသူကိုသင်စာမျက်နှာသတ်မှတ်ထားသောပရိုဖိုင်ရုပ်ပုံ link ကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Instagram ကို hashtag ဓါတ်ပုံများကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
Instagram ကိုအတွက်အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံများအဘို့အရှာဖွေရေးရိုးရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ယခင်ကဖော်ပြချက်ထဲတွင်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက်ထိတွေ့ခဲ့ကြကြောင်း hashtags ကို (tags များ) အတွက် search function များအားအကောင်အထည်ဖော်။ အဆိုပါ hashtags ကိုရှာခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆှေးနှေးမညျအကွောငျးပိုမိုသိရှိလိုပါက။ hashtag - သီးခြားအမျိုးအစားမှသူ့ကိုတာဝန်ပေးရန်ပုံထည့်သွင်းကြောင်းအထူးအမှတ်အသား။
Password ကို - Instagram ကိုအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကောင့်အရေးကြီးဆုံးဒြပ်စင်များ၏တဦးတည်း။ သူကရှုပ်ထွေးသောမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါကမိနစ်အနည်းငယ်အသစ်တစ်ခုကိုလုံခြုံရေးကီးကိုထည့်သွင်းမြှုပ်နှံထားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Instagram ကိုအတွက် Instagram ကိုပြောင်းလဲခြင်းပတ်စ်ကုတ်ထဲမှာစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ဆိုကို browser ကနေကြောင်း, ဖြစ်စေအဆိုပါဝက်ဘ်ဗားရှင်းမှတဆင့်ဖြစ်, သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း device များအတွက်တရားဝင်လျှောက်လွှာသုံးပြီးနိုင်ပါတယ်။
Instagram ကိုအသုံးပြုသူများကမကြာခဏသင်အနာဂတျအတှကျသိမ်းထားချင်ကြောင်းအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့မြေားကိုရှာပါ။ ထိုသို့လုပ်ဖို့အများဆုံးတတ်နိုင်လမ်း - တစ်ဦးပုံယူ။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းအတိုင်း, လိုအပ်ကြောင်းသမိုင်းသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာရိုးရိုး, Instagram ကို၏ပုံသဏ်ဌာဥပမာမဖြစ်နိုင်ပါကို download လုပ်ပါရှိရာကိစ္စများတွင်တစ်ဦးစခရင်ပုံအောင်ပေါ်ထွန်း။
များစွာသော user တွေအတွက်, Instagram ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူကလက်မှတ်ရေးထိုး, တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ကိန်းဂဏန်းကျဆင်းစတင်သည်အခါအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာသည်။ ဒီအခိုက်မှာအတိအကျစာရင်းမသွင်းထားသောသူသည်အထဲကရှာတွေ့မှအတော်လေးနားလည်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ subscriber များအားစာရင်းသာလူ 50, တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခက်ခဲနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်စံ tools များဤအချက်အလက်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေရယူ Instagram သူကိုအတိအကျနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်တောင်မှအခါ။
မားသားဘုတ်၏ BIOS update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အသိပေးချက်များကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို Instagram ကို
Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ Yandex အပေါ် Visual bookmarks ကို
ဖိုင်ကိုစနစ်ကနေကိုယ်ထိလက်ရောက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပြီး, သို့မဟုတ်ပါကပျက်စီးသောအခါ msvcr120.dll ဖိုင်နှင့်အတူမှားယွင်းနေသည်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် (။ ထိုသို့သော BioShock, ယူရို Truck ကား Simulator နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့) ဂိမ်းတစ်ခုကိုရှာမနိုင်လျှင်,, တကမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးသည် - "မှားယွင်းနေသည်, အဘယ်သူမျှမ msvcr120.dll" သို့မဟုတ် "msvcr120.dll ပျောက်ဆုံးနေသည်" ။ ဒါဟာအစတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များကိုလည်းဒီအမှားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်စနစ်အတွက်စာကြည့်တိုက်ကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအလိုငှါစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Skype ကို software များကို: စာပေးစာယူ၏သမိုင်းအပေါ်အချက်အလက်များ၏တည်နေရာ
https://termotools.com my.termotools.com © Instagram ကို 2019